कमरेड ! को बदलियो ? | शुभयुग
कमरेड ! को बदलियो ?
कुरा २०५७ सालको हो । सम्युक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम (युनडिपि) र स्थानिय विकास मन्त्रालयले गाउँ विकास कार्यक्रम तय गरेको थियो ।
सो कार्यक्रम जिल्ला विकास समिति धादिङ मार्फत सञ्चालन भएको थियो । म सामाजिक परिचालकको रूपमा गुम्दी गाविसमा खटिएको थिएँ । संगठन,बचत,शीप र प्रविधिलाई मूल मन्त्र मानेर तर्जुमा गरिएको सो कार्यक्रम समाज रुपान्तरणको प्रभाकारी विधि थियो !
सामुदायलाई सक्रिय सहभागी गराई योजना चक्रमा तल देखि माथि सम्मका विभिन्न चरण अवलम्वन गर्दै सामुदायिक विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि म समूह गठन गर्दै , प्रशिक्षण गर्दै सामाजिक परिचालनको कार्यमा लागिरहेको थिएँ ।
यत्तिकैमा माओवादीको एउटा टीम आएर “गुम्दी हाम्रो आधार क्षेत्र भएकोले यहाँ विदेशी साम्राज्यवादीहरुको कार्यक्रम गर्न पाइदैन तपाईँ यहाँबाट यो कार्यक्रम हटाउनोस्।“ भने ।
मैले युनडिपिको सहयोग मात्र हो, सरकारको कार्यक्रम हो, नेपाल पनि युयनको सदस्य भएकोले यो साम्राज्य वादी नभएको जिकिर गरेँ । तर उहाँहरुले “बढी बहस नगर्ने , हुदैन भने पछि हुदैन, तुरुन्त हटाउने।“ भन्नु भयो ।
मैले यो गाविसले माग गरेर ल्याएको कार्यक्रम भएकोले गाविसलाई भन्नु पर्ने तर हुन्छ भने ।
उनीहरुले गाविसको वैठक बसाउन आदेश दिए ,वैठक बस्यो, माओवादीको निर्देशन बजोमिम कार्यक्रम नगर्ने निर्णय भयो । त्यपछि म जिविस फर्केँ ।जिविस मा जानकारी गराएँ । तर मेरो कुरालाई सुनुवाइ नै भएन।
मेरा आदरणीय सभापती कम्रेड (जसको म एक इमान्दार कार्यकर्ता हुँ र अहिलेसम्म छु !) काम गर्न नसकेर बहाना बाजी गर्न आएको आरोप सहित, “खटाएको ठाउँमा जाने, अन्ट सन्ट कुरा नगर्ने, म कमरेडली व्यवहार होइन एडमिनिस्ट्रेटली व्यवहार गर्ने पदमा छु“ भन्नु भयो । त्यपछि मैले राजिनामा दिएँ र कामको खोजीमा लागेँ । त्यो कार्यक्रम गुम्दीमा गर्न सकिएन र पछि साङ्कोष सारियो ।
जसका लागि मैले विपक्षीको पिटाइले घाईते भएको खुट्टा खोच्याउँदै लौरो टेकेर एजेन्ट बसेर सभापतिमा जिताउन सहयोग गरेको थिएँ । तर त्यही नेताले मेरो योग्यता र क्षमताले पदपूर्ति समितिको परिक्षामा अब्बल अङ्क ल्याएर, प्रयोगात्मक परिक्षामा पनि राम्रो परफरमेन्स देखाएर अग्रिम बधाई पाएको योग्य मान्छेलाई तिरस्कार गरे !! मेरो कावु भन्दा बाहिर हुँदाको अवस्थालाई नबुझी कुनै सुनुवाइ बिना मलाई सम्रक्षण गर्नुको सट्टा लप्पु खुवाइ दिए ।
अहिले समय बदलियो माओवादी शान्ति प्रकृयामा आए, एमाले सँग एकता भयो, तिनै सभापति कमरेडलाई साम्सद बनाउन खटियो !
उहाँहरु ठूलो पदमा पुग्नु भयो । युयनको निशर्त कार्यक्रमलाई साम्राज्यवादी भन्नेहरु सरकारमा छन् । “अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तार वाद , मुर्दावाद !! “भन्ने कमरेडहरु अहिले इन्डो प्यासिफिक एप्रोचको अमेरिकी MCCको सशर्त कार्यक्रम पास गर्न खोज्दैछन् ।
अब भन्नुस् कमरेड ! को बदलियो ??